Wafti uu hogaaminayo madaxwayne ku xigeenka maamul-Goboleedka jubaland oo ay garoorka diyaaradaha garaad wiil waal aiport ku soo dhaweeyeen masuuliyiin sar-sare oo ay ka mid Tahay madaxwayne ku xigeenka DDSI. - Cakaara News
Wafti uu hogaaminayo madaxwayne ku xigeenka maamul-Goboleedka jubaland oo ay garoorka diyaaradaha garaad wiil waal aiport ku soo dhaweeyeen masuuliyiin sar-sare oo ay ka mid Tahay madaxwayne ku xigeenka DDSI.
Jigjiga(CN) Isniin Dec-15-2014.Waxaa maanta garoonka diyaarada ee garaad wiil waal international Airport si meeqaam sare ah loogu soo dhaweeyay wafti balaadhan oo uu hogaaminaya madaxwayne ku-xigeenka maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubaland State mudane cabdilaahi sheikh ismaaciil fartaag kuna weelinayeen Masuuliyiin uu ka mid yahay Gudoomiyaha Gobolka Jubada Dhexe ee Jubaland State Mudane C/rashiid Jire Qalinle.
Waftigan ayaa ay si heer sare ah ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee garaad wiil-waal international airport qaar ka mid ah masuuliyiinta xukuumada ugu saraysa oo ay ka mid yihiin madaxwayne ku-xigeenka ahna wasirka madaxtooyada DDSi marwo Sucaad Ahmed Faarax ahna Wasiirada Madaxtooyada iyo wasiirka dakhliga DDSI mudane ahmed maxamed shugri.
sidoo kale waxaa soo dhawaynta masuuliyiintan kaalin buuxda ka qaatay kooxaha fanka iyo suugaanta DDSI oo ku soo dhaweeyay waftigan ciyaaro dhaqmeedyo ay ka mid yahay ciyaarta dhaantada oo sanadihii ugu danbeeyay siwayn looga daba dhacay caana ay ku tahay soomaalida itoobiya.
Waxaana qolka nasashada ee garoonka diyaaradaha kula hadlay warbaahinta deegaanka, madaxwayne ku xigeenka maamul-goboleedka soomaaliyeed ee jubaland md cabdilaahi sheikh ismaaciil fartaag. Isaga oo ugu horayntii si diiran ugu mahad naqay xukuumada DDSI sida balaadhan ee ay walfigan u soo dhaweeyeen ayaa waxa uu sharaxaad dheerka bixiyay ujeedada socdaalkooda wuxuuna sheegay in deegaanka soomalida itoobiya yahay deegaanada si xawliya uu dhaqaalahoodu u koray horumar balaadhan uu ka hirgalay ujeedada socdaalooduna tahay in ay aqoon korodhsi ka qaataan hogaaminta deegaanka.
Wafigan ayaa waxay si fiican ula jabiyeen ciyaarta dhaantada kooxaha fanka iyo suugaanka DDSI oo soo dhawaynta wafigan ku maamuusay ciyaarta dhaantada